Nagarik News - वर्षा राउत भन्छिन्- 'पंखाअगाडि कपाल हल्लाउँदै नाच्थेँ'
वर्षा राउत भन्छिन्- 'पंखाअगाडि कपाल हल्लाउँदै नाच्थेँ'
म्युजिक भिडियोमा व्यस्त मोडल हुन्, वर्षा राउत। तीन वर्षमा उनले ८० भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी छिन्। भिडियोबाट पाएको लोकप्रियताकै कारण उनले फिल्म 'नाइँ नभन्नू ल–४' मा काम गर्ने मौका पाइन्। फिल्म '६क्का ५न्जा'मा पनि उनले अभिनय गरेकी छिन्। उनीसँग अनिल यादवले गरेकेा अन्तरंग कुराकानीः
व्यस्तता निकै बढेको छ है!
बिजी नै छु भन्नुपर्ला। भर्खरै फिल्म '६क्का ५न्जा'को सुटिङ सकाएँ। त्यसैले अहिले म्युजिक भिडियो र फोटोसुटका लागि 'प्याक्ड' भइरहेको छु।
तपाईंले अभिनयमा डेब्यू गरेको तीन वर्षमात्र भयो। यति छोटो समयमा धेरै चर्चा कमाउनुभयो। कारण के जस्तो लाग्छ?
तीन वर्षको अन्तरालमा ८० भन्दा बढी म्युजिक भिडियो र ठूलठूला दुई ब्यानरका फिल्ममा काम गर्ने अवसर मिल्दा एकदम खुशी लाग्छ। यो सब अभिनयप्रति मेरो 'प्यासन'को नतिजा हो जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, मान्छेहरूसँग गर्ने व्यवहार पनि महत्वपूर्ण पाटो हो। नयाँ कलाकार भएर स्टारजस्तो व्यवहार गर्न थाल्यो भने त कोही पनि चल्दैन। संघर्षै गरेर आएको कलाकारले पनि स्टार भएपछि त्यस्तो व्यवहार देखाउनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। लगनशीलता भयो भने ममात्र होइन, जो पनि चल्छ। मेरो काम, लगनशीलता र व्यवहारकै कारण म यति छोटो समयमा धेरैको रोजाइमा परे जस्तो लाग्छ।
अभिनय तपार्इंको पुरानै रुचि हो?
हो। मलाई सानैदेखि एक्टिङ गर्न असाध्यै मन लाग्थ्यो। ऐना हेर्दै म एक्टिङ गर्थें। टीभीमा नाचेको देखेर नक्कल गर्थें। पंखाका अगाडि बसेर कपाल हल्लाउँदै नाच्थेँ। जसरी भए पनि स्त्रि्कनमा देखिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। फिल्म हेर्दा हिरोइनलाई देखेर यसको ठाउँमा म भए पनि हुने भन्ने लाग्थ्यो। यही रहरका कारण पनि एउटा म्युजिक भिडियो गरेँ। पछि 'प्यासन' बन्दै गयो। अहिले यही क्षेत्रमा सक्रिय छु।
तपाईंले पहिलोपल्ट अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो नै 'रि–सुट' भएको थियो है?
हो। गायक मनोज राजको 'पानीको फोकाजस्तै' बोलको गीतमा मैले अभिनय गर्ने मौका पाएकी थिएँ। अनु शाह लिड रोलमा हुनुहुन्थ्यो, म साइडमा थिएँ। सुटिङ राम्रै सँग भएको थियो। पछि त्यो गीत फेरि रिसुट भएछ। किन भयो? मलाई थाहा भएन। रिलिज भएको मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो चाहिँ गायिका सिर्जना कार्कीको 'रोजेको मैले' हो।
'पानीको फोका'को प्रस्ताव तपाईंलाई कसरी आएको थियो?
भिडियो खेल्नुअघि नै म अलि–अलि मिडियामा आइसकेकी थिएँ। त्यही भएर केहीसँग चिनजान भइसकेको थियो। एकदिन एकजना दाइसँग म क्याफेमा बसिरहेको थिएँ। उहाँकै माध्यमबाट मैले भिडियो खेल्ने कुरा भयो। खेलेँ पनि। तर, विडम्बना, पछि रिसुट भयो। त्यतिबेला दुःख लागेको थियो।
तपाईंले गर्ने अधिकांश म्युुजिक भिडियोमा मोडल पल शाह तपाईंको अपोजिटमा हुन्छन्? तपाईंहरूको जोडीलाई दर्शकले औधी रुचाएर हो या अन्य केही कारण छ?
हो। मैले धेरैजसो म्युजिक भिडियो पल शाह र निराजन प्रधानसँग खेलेकी छु। दर्शकले पर्दामा मलाई खास रुचाएको चाहिँ निराजनसँग हो। धेरैले मलाई पलसँग खेलाइरहेका हुन्छन्। सायद ऊसँगको जोडी पनि दर्शकले रुचाएरै होला। पर्दामा काम गर्ने 'केमेस्ट्री' पनि मन परेको हुन सक्छ। हामी 'अफस्त्रि्कन' पनि राम्रा साथी हौँ।
म्युजिक भिडियोमा पटक–पटक देखिएको यही जोडी फिल्म 'नाइँ नभन्नू ल–४' मा पनि देखियो। तपाईंहरू दुवैजनाको डेब्यू फिल्म पनि यही भइदियो। यसको कारण पनि तपाईंहरूको जोडीको लोकप्रियता नै हो?
हुन सक्छ। यो फिल्मका लागि मलाई फाइनल गर्नुअघि पललाई गरिसकिएको थियो। त्यतिबेला मेरो साथी पनि स्टार हुने भयो भन्ने खालको फिलिङ मनमा आएको थियो। पछि निर्देशक विकास आचार्य दाइले मलाई पनि बोलाउनुभयो। 'तिमीलाई फिट हुने रोल छ। तयार छौ?' भन्नुभयो। मलाई यसअघि 'नाइँ नभन्नू ल–२' र 'नाइँ नभन्नू ल–३' का लागि पनि अफर आएको थियो। पारिवारिक समस्या र पढाइका कारणले खेल्न सकेको थिइनँ। यो पल्ट चाहिँ 'खेल्ने मन त छ। अरू त तपाईंहरूको निर्णय हो। राख्नुहुन्छ भन्ने राख्नुहोस्' भने। पछि थाहा भयो– उहाँहरूले मलाई फाइनल गरिसक्नुभएको रैछ।
फिल्म र म्युजिक भिडियोमा काम गर्दाको भिन्नता के हुँदो रैछ?
धेरै नै फरक हुँदो रैछ। म्युजिक भिडियो एक दिनमै सकिन्थ्यो। धेरैमा दुई दिन लाग्थ्यो। तर, फिल्मका लागि एक–डेढ महिना लाग्छ। म्युजिक भिडियोमा मुखमात्र हलाएर गीत गुनगुनाइन्छ। फिल्ममा 'फिल'सहित 'डायलग' बोल्नुपर्छ। मलाई फिल्मको सुटिङताका डायलग बोल्दा धेरै लाज लागेको थियो।
थुप्रैपल्ट भिडियोमा सँगै काम गरेको पल शाह नै फिल्मको जोडी हुँदा निकै सजिलो पनि भयो होला!
अवश्य पनि। अर्को कुरा हामी सबै फिल्मका कलाकारबीच सुटिङ अगावै भेटघाट पनि भयो। धेरै समय सँगै बितायौँ पनि। एकअर्कालाई बुझ्यौँ। जसले गर्दा काम गर्न सजिलो भयो।
तपाईंको डेब्यू फिल्म हलमा चल्यो। कस्ता–कस्ता प्रतिक्रिया पाउनुभयो?
'नेगेटिभ कमेन्ट'को कुरा गर्नुपर्दा केहीले 'अलिकति मोटी देखियौ' भने। त्यो हो पनि। अहिले पनि मोटाएकै छु। त्यतिबेला अलि कम मोटो थिएँ तर स्त्रि्कनमा चाहिँ अलि बढी नै देखियो। अहिले चाहिँ फिल्म '६क्का ५न्जा'मा मोटाउनुपर्ने रोल भएर हल्का मोटाएकी छु। त्यस्तै 'राम्रो अभिनय गरिस्' भनेर प्रशंसा गर्ने थुप्रै भेटेँ। मैले दर्शकसँगै फिल्म पनि हेरँे। त्यतिबेला हलबाट निस्किएका दर्शकको आँखामा आँसु देख्दा खुशी लागेको थियो। फिल्ममा अञ्जनाको 'क्यारेक्टर'लाई न्याय गरे जस्तो महसुस भा'थ्यो।
हास्य कलाकारको फिल्म '६क्का ५न्जा'मा तपाईंलाई लिनुको कारण के रहेछ? कसरी अफर आएको थियो?
उहाँहरूले मेरो म्युजिक भिडियोहरू हेर्नुभएको रैछ। मैले एउटा म्युजिक भिडियोमा '६क्का ५न्जा'का लागि चाहिने खालको भूमिका निर्वाह गरेकी रैछु। त्यसैले दीपकराज गिरी दाइले निर्माता विकास आचार्यसँग मेरो कुरा गर्नुभएछ। त्यसपछि मसँग कुरा भयो। फिल्मको अफर आउँदा मलाई नि खुशी लाग्यो। दर्शकले '६क्का ५न्जा'मा मलाई एकदमै फरक खालको भूमिकामा पाउनेछन्।
फिल्ममा लागेपछि मोडलिङलाई छाड्नुहुन्छ या सँगै लानुहुन्छ?
म म्युजिक भिडियोकै कारण अहिले फिल्ममा छु। त्यसैले जसले खान दियो उसैलाई त्याग्नु त भएन नि। पहिलेको तुलनामा जस्तो पाए त्यस्तै भिडियोमा काम गर्दिनँ। छानेर मात्र गर्छु, कम गर्छु। सुरुसुरुमा मैले नछानीकन जस्तो पनि म्युजिक भिडियोमा काम गरेँ। फिल्म पनि राम्रो स्त्रि्कप्ट, राम्रो ब्यानर, राम्रो निर्देशक र राम्रो टिमसँग काम गर्छु।
अभिनयमा लाग्न परिवारको 'सपोर्ट' कत्तिको छ?
सुरुमा त थिएन। ममीलाई समस्या नभए पनि ड्याडीले त मलाई स्त्रि्कनमा देख्न चाहनुहुन्नथ्यो। म लुकीलुकी काम गर्थें। 'छिटो घर आइज। तेरो सुटिङ सकिएन?' भन्दै दबाब दिइरहनुहुन्थ्यो। पछि मेरा केही म्युजिक भिडियो हिट हुन थालेपछि चाहिँ सपोर्ट हुन थाल्यो। ड्याडीलाई पनि मैले कुनै–कुनै कार्यक्रममा सँगै लिएर जान थालेँ। बिस्तारै उहाँको पनि मन बदलियो। 'सबै नराम्रा हुँदा रैनछन् यो क्षेत्रमा' भन्ने महसुस भयो उहाँलाई। त्यसपछि त म रातको १२ बजे घरमा पुग्दा पनि केही खाइस् कि भोकै छस्? भनेर सोध्न थाल्नुभयो। भोकै रैछु भने पकाएर खुवाउनुहुन्छ।
फिल्म हेरेपछि त सपोर्ट झन् बढ्यो होला!
हो नि। ड्याडलाई कहिल्यै फिल्म हेर्न मन लाग्दैनथ्यो। १८ वर्षपछि मेरो फिल्म हेर्न उहाँ हल पुग्नुभएको थियो। एकठाउँमा बस्नै नसक्ने मान्छे तीन घण्टा लगातार हलमा बसेर मेरो फिल्म हेर्नुभयो। पछि मैले कस्तो लाग्यो भनेर सोध्दा 'ठीकै छ। अझै राम्रो गर भन्नुभयो।' घरमा सबैको जवाफ त्यस्तै थियो। मेरो घरमा त्यो भनेको राम्रो गरिस् भनेको हो। किनकि, घरमा तारिफ कसैले गर्नुहुन्न। भरसक अझ सुधारोस् भनेर नराम्रो भन्ने चलन छ।
अध्ययन चाहिँ कहाँ पुग्यो?
अहिले म्यानेजमेन्ट विषयमा स्नातक चौथो वर्षमा अध्ययनरत छु।
अभिनय र पढाइ सँगसँगै लग्दा गाह्रो हुन्न?
एकदमै गाह्रो हुन्छ। मैले पहिलो र दोस्रो वर्ष त पढाइमै बढी 'फोकस' गरेँ। त्यसैले फिल्म पनि गरिनँ। म्युजिक भिडियो पनि शनिवार पारेर मात्र गर्थेँ। अहिले चाहिँ कलेज 'रेगुलर' जाँदिनँ। तर, परीक्षा दिन्छु। राम्रै गरिराछु। गाह्रो भए पनि 'म्यानेज' गर्न सकिँदो रैछ।
दुइटा फिल्म खेलिसक्नुभयो। अभिनय सिक्नुभएको छ?
अहिलेसम्म त छैन। जे गरिराछु आफ्नै भरमा गरिराछु। अब सिक्ने रहर चाहिँ छ। फिल्म '६क्का ५न्जा'को सुटिङताका मैले 'रियलाइज' गरेँ– 'मलाई एक्टिङ आउँदैन'। अभिनय सिकिराको छैन। तर, रहर चाहिँ छ। 'नाइँ नभन्नू ल–४' मा त म आफूजस्तै चरित्रमा थिएँ। तर, '६क्का ५न्जा'मा अर्कै चरित्रमा छु। त्यो चरित्रले बोल्ने 'टोन' नै अर्कै हुन्छ, जुन मलाई दिमागमा ल्याउन एकदम गाह्रो भएको थियो। त्यतिबेलै अब 'एक्टिङ क्लास' लिन्छु भन्ने सोचकी थिएँ।
सानैदेखि टीभीमा हेरिरहेका कलाकारसँग '६क्का ५न्जा'मा काम गर्न पाउँदा कस्तो महसुस गर्नुभयो?
एकपटक म, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, नम्रता सापकोटा र बुद्धि तामाङ एउटै गाडीमा फिल्मको गीत सुटिङका लागि चितवन गइरहेका थियौँ। म ट्वाँ परिरहेको देखेर केदार दाइले सोध्नुभयो– 'वर्षा किन टोलाएको? के भयो तिमीलाई?' मैले भनेँ– 'सधैँ तपार्इंहरूलाई टीभीमा देख्थेँ। मेरी बास्सै, जिरे खुर्सानी आयो भन्दै घरमा चिच्याउँथे। आज तपार्इंहरूसँगै यात्रा गरिरहेकी छु। सँगै काम गर्न पाउँदा दंग छु।'
सुनिन्छ– अभिनेत्री प्रियंका कार्की तपाईंको रोल मोडल रे। दुवै फिल्ममा उहाँसँग काम गर्न पाउँदा झन् दंग हुनुहुन्छ होला!
हो नि। म उहाँलाई 'भर्सटायल एक्ट्रेस'का रूपमा लिन्छु, एकदमै मान्छु। फिल्म 'नाइँ नभन्नू ल–४' मा उहाँसँग काम गर्दा सुरुमा त डर लाग्यो। 'स्टार हो, हामीजस्ता नयाँ कलाकारलाई भाउ नदिने होला ' भन्ने लागेको थियो। पछि त बिलकुल फरक पाएँ। एकदमै सहयोगी हुनु हुँदो रैछ। नजानेको सिकाउनुहुन्थ्यो। सुटिङताका एउटै रुम सेयर गरेर पनि बस्यौँ हामी।
तपाईंलाई फिल्म क्षेत्रको के कुराले बढी चित्त दुख्छ?
चित्त दुख्ने कुरा धेरै छन्। अव्यावसायिकतादेखि चित्त दुख्छ। एकअर्काको कुरा काट्नेदेखि चित्त दुख्छ। आफूले मानेको साथीले पनि अरूसँग कुरा काटिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर चित्त दुख्छ।
'मैले स्तन किन फालेँ?'
क्यान्सरसँग एक दशक लड्दालड्दै बितिन् मेरी आमा, छपन्न वर्षको उमेरमा। नातिनातिनाका मुख हेर्ने र तिनलाई काखमा खेलाउने ठूलो धोको थियो उनको। मेरा पछिल्ला सन्तानले उनलाई देख्न पाएनन्। उनी कति मायालु...
तीजको रहर आयो बरिलै...
निर्देशक प्रकाश थापासँग मेरो राम्रो मित्रता थियो। उहाँका फिल्मका लागि मैले गीत लेखिदिएको थिएँ। आजभन्दा करिब १५ वर्षअगाडिको कुरा गर्दैछु म। एक दिन प्रकाशजी र उहाँको छोरा विजय जावलाखेलस्थित मेरो...
रोजी भुसालतीजमा मन्दिर जान, पूजा गर्न खूब मन पर्छ। शिवभक्त भएकीले तीजमा व्रत बस्नु परिहाल्यो। कडा व्रत चाहिँ बस्दिनँ। बेलुका पूजा सकाएर खाना खान्छु। साथीहरूसँग नाचगान गरी रमाइलो गर्छु।
'अहिले त नमस्ते पनि कमर्सियल!'
बाल्यकालदेखि नै अभिनयमा लागेकी अभिनेत्री शुभद्रा अधिकारी अझै पनि फाट्टफुट्ट फिल्ममा काम गर्दैछिन्। उनले धेरै वटा फिल्ममा आमा भएर अभिनय गरिन्। कतिपय त उनलाई 'चलचित्रकी आमा' नै भन्छन्। उहिले फिल्मभन्दा...
कोमा इन उडिसाः क्या डेन्जरस !
इन्टरनेसनल थिएटर एन्ड डान्स फेस्टिभल–२०१४ का लागि शिल्पी थिएटरको १६ जनाको जम्बो टोली उडिसा पुग्दा राउरकेला शहर हाम्रो स्वागतमा तयार भएर बसेको देखिन्थ्यो।
एचआईभी संक्रमितको सहयोगार्थ 'सम्बोधन'
फिल्म 'सम्बोधन'ले च्यारिटी शो गर्दै प्रदर्शन थालेको छ। समाज सुधारको विषयलाई जोड दिएर बनाइएको फिल्मले एचआईभी संक्रमित बालबालिकाको सहयोगार्थ दाङमा पहिलो शो देखाएको हो।
आफ्नै ‘स्टाइल'मा तीज
साउन महिनादेखि नै हातभरि रंगीचंगी चुरा लगाएकी उषा पौडेल तीजको माहोल मज्जैले जमाउने धुनमा छिन्। साथीसंगी भेला भई पशुपतिनाथ मन्दिर जाने योजना छ उनको। शिवजीको पूजा गरेपछि उतै नाचगान गर्ने...